Home » Lahatsoratra farany farany » Kolontsaina » Tantaran'ny hotely: Hotely sy Fandroana Libby, New York, NY
Kolontsaina • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Libby's Hotel sy fandroana
Tamin'ny faran'ny taona 1920, nirongatra ny tsenam-bola, nahazo tombony ny orinasa ary nanangana tranobe vaovao haingana ireo mpandraharaha.
Ny orinasa mpampindram-bola dia nanomboka nanolotra antoka azo antoka amin'ny findramam-bola, karazana fampiasam-bola vaovao.
Iray amin'ireo trano vaovao ny Libby's Hotel and Baths misy rihana 12, namboarina tamin'ny 1926 teo amin'ny zoron'ny Chrystie sy ny Delancey Streets amin'ny ilany atsinanana atsinanan'i New York.
Io no hotely fandraisam-bahiny jiosy voalohany nisy dobo filomanosana, gym fanaovana fanatanjahan-tena maoderina, fandroana Rosiana-Tiorka ary fatana misokatra ho an'ny fiarahamonina iray manontolo.
Ny mpandrindra dia i Max Bernstein, mpifindra monina avy any Slutzk, Russia, izay tonga tany New York niaraka tamin'ny fianakaviany tamin'ny taona 1900 rehefa 11 taona i Max. Ny arabe nitomboan'i Max teo amin'ny ilany atsinanana dia feno mpivarotra kalesy, ny sasany sarety mitaingin-tsoavaly, ankizy milalao lalao an-dalambe ary ireo mponin'ny trano no mifanerasera amin'ny tokonam-baravarana. Mampalahelo fa rehefa maty tao anatin'ny herintaona i Libby reniny dia nandositra ny tranony i Max ary natory tao amin'ny valan-javaboary kely iray tsy lavitra teo. Tao anatin'ireo taona faramparany dia nilaza i Max fa ny nofinofy nananganana ny Hotely Libby eo an-joron'ny Chrystie sy ny Delancey Streets dia tonga tany aminy io alina io.
Taorian'ny taona maro nananany andiana trano fisakafoanana maromaro, samy nantsoina hoe Libby's, i Max dia afaka nahazo tany teo amin'ny zorony ankafiziny izay nanorenany ny hotely nisokatra tamin'ny 5 aprily 1926. Toa publicista teraka voajanahary i Max satria nanambola angovo sy vola tsy manam-paharoa amin'ny fampielezan-kevitra fampiroboroboana amin'ny gazety maro miteny Yiddish isan'andro. Amin'ny andro fanokafana, ny New York Times nanatevin-daharana ireo taratasy hafa tamin'ny fitaterana ny fisokafana lehibe. Ny Libby Hotel dia nanasongadina efitrano malalaka misy rihana roa mahavariana misy valin-drihana plaster miloko marevaka tohanan'ny tsanganana marbra flute. Ny trano fandraisam-bahiny dia nisy efitrano fivoriana, efitrano fanaovana fisakafoanana ary trano fisakafoanana roa. Max dia nanao hetsika fiantrana sy kilasy filomanosana ho an'ny ankizy manodidina.
Ny Libby Hotel dia nandefa tamin'ny onjampeo Yiddish voalohany, WFBH (avy eo an-tampon'ny Hotel Majestic) izay manana fialamboly malaza, teatra mivantana ary taratra toa an'i Sol Hurok, Rube Goldberg ary George Jessel. Tsy nitsitsy vola i Bernstein, tamin'ny nandraisany talen'ny mozika Josef Cherniavsky, mpitarika ny Yiddish-American Jazz Band ary fantatra amin'ny anarana hoe Paul Paul Whiteman jiosy. Nandritra ny roa taona voalohany dia toa fahombiazana lehibe ny trano fandraisam-bahiny fa tamin'ny faran'ny taona 1928 dia nilatsaka ny tampon-trano.
Matsilo trano fandraisam-bahiny vaovao no nisokatra tao New York. Betsaka, mba hijanona ho solvent, no nanomboka nifantoka tamin'ny jiosy, nibolisatra ny mpanjifan'i Max. Max dia mety ho afaka nifaninana kokoa raha tsy teo am-pivoarana ambany ny fihetsem-pony; ny 20 Oktobra 1926 dia maty i Sarah vadiny. Tamin'ny fotoam-pitsarana taty aoriana dia nilaza i Max fa ny alahelo niainany dia nahatonga azy tsy afaka niasa.
Ankoatr'izay, ny mpampindram-bolany voalohany dia ny American Bond and Mortgage Company (AMBAM), mpampindram-bola tsy azo resena. Talohan'ny fianjeran'ny tsenan'ny stock 1929 dia nitsoaka tao amin'ny hotely ny AMBAM ary, tamin'ny fihodinana tsy ampoizina, notendren'ny ben'ny tanàna Jimmy Walker i Joseph Force Crater, mpisolovava mifandray amin'i Tammany ho mpandray. Araka ny voalazan'ny mpitsara Crater, mety nanana fahalalana tao anaty ny drafitra hanitatra ny làlana Chrystie ny AMBAM. Na izany na tsy izany, AMBAM izao dia nilaza fa 3.2 tapitrisa dolara ny hotely (taorian'ny nanombatombana ny Hotely Libby tamin'ny $ 1.3 tapitrisa fotsiny ho an'ny fananana). Tamin'ny alàlan'ny sehatra nalaza dia nandray ny fananana i New York City ary nandoa vola 2.85 tapitrisa dolara AMBAM. Noravan'ilay tanàna avy eo ireo trano ao amin'ilay sakana, anisan'izany ny Hotely Maxbystein's Libby's and Baths.
Saingy mbola misy tantara hafa ihany. Tamin'ny 1931, AMBAM dia voaheloka noho ny tetika mitovy amin'ny Mayflower Hotel any Washington, DC Ilay mpitsara Crater ihany no mpandray ny fananan'i Mayflower. Nanjavona izy efa-bolana taty aoriana ary tsy hita intsony. Nihalalaka ny làlan'i Chrystie, napetraka ny Great Depression ary farany, nivadika ho ny Sara Delano Roosevelt Park nataon'i Robert Moses.
Rehefa maty i Max Bernstein tamin'ny 13 Desambra 1946, ny New York Times Nanoratra ny fahafatesam-pahafatesana: "Max Bernstein, 57 taona, tompona hotely… Nanangana trano $ 3,000,000 tany Slums, mba hahitana ny Fahatsiarovana an'i Neny Razed."
Izay no hiafaran'ity tantara mahavariana ity afa-tsy ny Pakn Treger * nitatitra ity tohiny manaraka ity ny lahatsoratra:
Nanjombona tao anaty haizina ny tantaran'i Libby mandra-pahatongan'ny fahavaratry ny taona 2001, raha niampita ny ampahan'ny arabe akaikin'ny zoron'ireo Chrystie sy ny Delancey Streets, ka namorona hady. Nihalehibe ny lavaka nitelina hazo iray manontolo ary nanomboka niditra an-dalambe teny an-dalambe tao an-tanàna sy ilay foibe zokiolona teo akaiky teo tao amin'ny Zaridainan'i Sara Delano Roosevelt. Tamin'izany andro tsy manan-tsiny talohan'ny 11 septambra izany, ny lavaka fantsakana dia toa ny loza mitatao indrindra atrehin'i Manhattan ambany.
Tsy nahalala ny antony ny injeniera ao an-tanàna ka nampidinin'izy ireo tao anaty foana ilay fakantsary. Gaga izy ireo, 22 metatra ambanin'ny tany no nahita efitrano iray tsy simba, feno fonosam-boky. Rehefa nitady rakitsoratra tao amin'ny Archives Monisipaly izy ireo dia nahalala fa ny Libby's Hotel dia nijanona teo ary nahita efitrano tao ambanin'ny tany izy ireo. Ao anatin'ny New York Times lahatsoratra tamin'ny 11 septambra 2001, ny kaomiseran'ny valan-javaboary ao New York, Henry J. Stern dia notononina nanao hoe: “Mampatsiahy ahy an'i Pompeii izany.”
Mifanohitra amin'i Pompeii, tsy nisy ny fanandramana tonga tany amin'ny efitrano na nihady azy. Ny injenieran'ny tanàna dia nisafidy ny hameno azy io amin'ny aloboka, mandevina ny efitrano sy ny ao anatiny mifono mistery. Nisy hazo vaovao nambolena, ary namboarina ny valan-javaboary.
* "Ritz with a Shvitz" nataon'i Shulamith Berger sy Jai Zion, Pakn Treger, Lohataona 2009
Ny boky vaovaony "Great American Hotel Architects Volume 2" dia navoaka.
Boky hotely hafa navoaka:
• Hotelera amerikana lehibe: mpisava lalana ny indostrian'ny hotely (2009)
• Namboarina haharitra: Hotely 100 taona an-taonany any New York (2011)
• Namboarina haharitra: Hotely 100 taona an-taonany atsinanan'i Mississippi (2013)
• Hotelera Amerikanina lehibe Boky 2: Mpisava lalana ny indostrian'ny hotely (2016)
• Namboarina haharitra: Hotely 100 taona an-dafin'ny Andrefan'i Mississippi (2017)
• Hotel Mavens Boky 2: Henry Morrison Flagler, Henry Bradley Plant, Carl Graham Fisher (2018)
• Great American American Architects Volume I (2019)
• Hotel Mavens: Boky 3: Bob sy Larry Tisch, Ralph Hitz, Cesar Ritz, Curt Strand
Ireo boky rehetra ireo dia azo alahatra avy amin'ny AuthorHouse amin'ny alàlan'ny fitsidihana www.farifadicorn.com ary tsindrio ny lohatenin'ilay boky.